Zvingaita Sei Kuti Kuwedzeredzwa Kwechokwadi Kukanganisa Kufuridzira Kushambadzira? | Martech Zone
COVID-19 yachinja matambiro atinoita. Nedenda rinopisa kunze, vatengi vari kusarudza kugara mukati uye kutenga zvinhu online panzvimbo. Ndosaka vatengi varikuisa mukati mevanokurudzira zvakanyanya uye zvakanyanya nezve-sei mavhidhiyo pane chero chinhu kubva kuyedza pamuromo kuti vatambe mitambo yedu yevhidhiyo yatinofarira. Kuti uwane zvimwe pamhedzisiro yedenda pane kukurudzira kushambadzira uye mitengo, ona kudzidza kwedu kwazvino.
Asi izvi zvinoshanda sei kune izvo zvinhu izvo zvinofanirwa kuonekwa kuti zvitendwe? Kutenga lipstick iwe yawaka sampula mu-chitoro ndiko kuchema kukuru kubva kuodha kuti kuona kusingaonekwe. Unoziva sei kuti zvichaonekwa sei pachiso chako usati watenga? Ikozvino pane mhinduro uye vanokurudzira vari kutiratidza nzira neinonakidza, yechokwadi, uye inovaraidza zvemukati.
Parizvino, isu tese tatoona yakawedzera chokwadi (AR) mune imwe nzira. Iwe pamwe wakacherekedza vanokurudzira vanogovana mavhidhiyo avo pachavo vakapfeka cutey dhijitari puppy nzeve nemhino, kana zera mafirita kumeso kwavo. Unogona kuyeuka makore mashoma apfuura apo munhu wese aishandisa nharembozha kudzingirira vatambi vePokemon mudhorobha rese. Ndiyo AR. Zvinotora mufananidzo unogadzirwa nekomputa uye unoisa pamusoro payo pafoni yako, kuti iwe ugone kuona Pikachu akamira pamberi pako chaipo, kana kushandura maratidziro anoita chiso chako. AR yatove inozivikanwa pamasocial media nekuda kwekukosha kwayo kwevaraidzo. Asi pane zvakawanda zvakawandisa mukati mepasi rese ecommerce. Ko kana iwe ukaona iyo lipstick pachiso chako usina kusimuka pamubhedha wako? Ko kana iwe uchigona kuyedza neakasiyana kutaridzika kubva kunyaradzo uye chengetedzo yeako wega imba, usati watombosvika kune kiredhiti kadhi? Uine AR, unogona kuita zvese izvo uye nezvimwe.
Mhando zhinji dziri kusvetuka pane iyi tekinoroji, iyo inotarisirwa kuramba ichivandudza. Kubva pamakeji kusvika pakushongedzwa kwembambo kusvika kubhutsu, vatengesi vari kutsvaga nzira nyowani dzekushandisa iyi tech inonakidza. Panzvimbo penzvimbo dzakanaka dzembwanana, unogona kuyedza magirazi matsva kana gumi nemaviri. Panzvimbo pemarara uye makore ari kuyangarara pamusoro pemusoro wako, unogona kuyedza bvudzi nyowani pahukuru. Iwe unogona kunyange kuenda kunofamba mune vaviri chaiwo masiketi. Uye zvinoonekwa zviri kukura zviri kuitika nguva dzese.
Virtual kuyedza-ons, sekudaidzwa kwetsika iyi, kunonakidza uye pamwe kungangoita muropa kune wepakati mutengi. Inofungidzirwa mamirioni makumi mashanu enetiweki vashandisi vanoshandisa AR mu50. Saka ibasa ripi rinogona kufurirwa nevatambi mune izvi zvese? Kutanga, avo vega kuedza-ons vanosvika mazana emamiriyoni evateveri mumafashoni uye maindasitiri erunako, vachityaira vatengi vakanangana nemaapps avo avanofarira kuti vatambe vakazvitenderedza. Mhando dzisina kubata kusvika kuAR dzichazozviwana dzave parumananzombe sevanokurudzira vanotumira vateveri vavo mumapoka kuti vaedze tekinoroji yazvino.
Sezvo tekinoroji yeAR ichivandudza, vanokanganisa havangatomboda kuve nechavo chipfeko kuratidza kuti vachataridzika sei machiri, zvinoreva kuti zvimwe zvirimo nekukurumidza. Fungidzira mikana senge vanokurudzira vanoungana kuti vararame chaiwo mafashoni anoratidza. Zviitiko zvakakura zvepamhepo zvinogona kugadzirwa zvakatenderedza pfungwa yeboka revanochinja kuyedza zvipfeko zvakafanana zvekuratidzira maitiro avachaonekwa pane akasiyana maumbirwo emuviri uye saizi. Uye zvese zvaigona kurongedzwa pasina kana mumwe wavo akambosiya dzimba dzavo dzekugara.
Asi mafashoni uye runako kuyedza-haasi iwo ega mashandisiro eAR. Sechishandiswa chine demo chishandiso, AR ndiyo mhinduro yevanokurudzira kuratidzira zvigadzirwa zvinonyatsoda kutariswa kuburikidza nevhidhiyo. Izvi zvinogona kureva kuratidza kushandiswa chaiko kwezvigadzirwa zvevhudzi, asi zvinogona zvakare kuwedzera munzvimbo dzakadai seindasitiri yemitambo, sekuratidzira mitambo yemavhidhiyo. Mune indasitiri yemumba, IKEA iri kuvhura app inonzi IKEA Nzvimbo, iyo inobvumidza vashandisi kuyedza zvidimbu zvemidziyo mudzimba dzavo vasati vatenga, kuisungira kumba, nekuenda kuyedza kuzviisa pamwechete.
Fungidzira zviitiko zvepamhepo umo vanokurudzira vanokuratidza maitirwo azvo nekutora dzimba dzavo uye kuitisa hupenyu kuvhota pamusoro petafura nyowani yekuisa mudzimba dzekudyira. Kune nzvimbo yakawanda yekugadzira sezvo tekinoroji iri kutumbuka.
Isu tatoziva kuti Youtube yakaputika nemavhidhiyo kubva kune vanokurudzira sevateveri vaishuva mhando nyowani yezvinyorwa. Anoda kusvika mabhiriyoni mashanu mavhidhiyo anoonekwa pazuva paYouTube nevapfuuri vanopfuura mamirioni makumi matatu. AR inonyanya kugadzirisa pane fomati. Icho chizvarwa chinotevera cheshambadziro. Uye sezvo mikana yeAR ichiwedzera kunyangwe kupfuura kushambadzira kuita chaiko-kwepasirese sedzidzo uye kudzidza kwemakambani, iyo tech inongoramba ichingove nani. Mabhiza ekukurumidza anotora mukana wezvaanogona uye kukurudzira kushambadzira kunogona kuvaitira, zvirinani pavanozove.
Kuti udzidze zvakawanda nezve kushambadzira kushambadzira x AR uye nemabatiro aingaitise zita rako padanho rinotevera, unogona kutirovera runhare uye mumwe munhu kubva kuchikwata chedu anosvika mukati maawa makumi maviri nemana.
Bata A & E.
A&E idhijitari agency ine iyo hombe mutengi portfolio emakambani eFortune 500 akadai sa Wells Fargo, J & J, P&G, uye Netflix. Vatangi vedu, Amra naElma, ndivo mega vanokurudzira nevanopfuura mamirioni 2.2 vateveri venharaunda; ona zvakawanda nezve A&E pa Forbes, Bloomberg Terevhizheni, Financial Times, Inc., uye Bhizinesi Insider Vhidhiyo.
Tags: a & eAmra naElmaarAugmented realityrunakofashoniikea nzvimbokushambadzira kushambadzirakufurira kuedza-onkuedza-onchaiwo edza-onsYouTube